कसरी पीसी, एन्ड्रोइड र आईओएस मा ट्विटर भिडियो डाउनलोड गर्ने ग्याजेट समाचार
ट्विटरमा भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
ट्विटर को पल को एक सबसे लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क को रूप मा मुकुट गरिएको छ। यो एक वेब वा फोन अनुप्रयोग हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ। व्यक्ति वा पृष्ठहरू तपाईंको लागि रूचि राख्ने अनुसरण गर्न सक्षम हुनुबाट, बहसहरूमा भाग लिदै, समाचारको साथ राख्दै ... संक्षेपमा, यसमा धेरै सम्भावनाहरू छन्, त्यसैले किन धेरै अनुयायीहरू प्राप्त गर्नका लागि तरिकाहरू खोज्नुहोस्.
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ, ट्विटरमा हामी भिडियोहरू फेला पार्दछौं। खाताको साथ प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक नेटवर्कमा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्दछन्। केहि विन्दुमा त्यहाँ एक भिडियो हुन सक्छ जुन तपाईंलाई चासो लाग्दछ, र तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। तर सामाजिक नेटवर्कले हामीलाई यो सम्भावना स्वभाविक रूपमा दिदैन। तसर्थ, यसको लागि हामीले तेस्रो पक्षहरूमा फर्कनु पर्छ।
त्यसोभए हामी जाँदैछौं हामी कसरी ट्विटरमा भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छौं देखाउनुहोस्। हामी यो दुबै अनुप्रयोगको डेस्कटप संस्करण र मोबाइल फोनको लागि यसको संस्करणको लागि गर्नेछौं। त्यहाँ प्राप्त गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। दुबै वास्तवमै सरल छन्, तर तिनीहरूलाई चिन्न राम्रो छ।
1 ट्विटरबाट तपाईंको कम्प्युटरमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
2 ब्राउजर विस्तारका साथ भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
3 एन्ड्रोइडमा ट्विटर भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
4 आईफोनमा ट्विटर भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
ट्विटरबाट तपाईंको कम्प्युटरमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाइँ यसको डेस्कटप संस्करण मा सामाजिक नेटवर्क को उपयोग गर्नुहुन्छ, हामीले डाउनलोड गरेको भिडियोहरू डाउनलोड गर्नका लागि चरणहरू कुनै पनि जटिल छैन। वास्तवमा, हामीसँग यस सम्बन्धमा धेरै विकल्पहरू छन्, जसले हामीलाई यस प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। याद गर्नुहोस् कि यसमा अपलोड गरिएका भिडियोहरूको धेरै ढाँचाहरू हुन सक्छन्, जस्तै MOV वा MP4, जुन धेरै सामान्य हो। केहि चीज जुन हामीले त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ जब तिनीहरूलाई पछि पुन: उत्पादन गर्दछ।
हामीले के गर्नु पर्छ त्यो ट्वीटमा जानुहोस् जुनमा हामीले भनिएको भिडियो भेटियो। त्यसोभए हामीले एरोमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जुन हामीले त्यो सन्देशको माथिल्लो दायाँ भागमा फेला पार्दछौं। यसमा क्लिक गरेर हामी धेरै विकल्पहरू पाउँछौं, जसमध्ये पहिलो भनिएको ट्वीटको लिंक प्रतिलिपि गर्नु हो जसमा एक भिडियो घुसाइएको छ। हामी यसलाई दिन्छौं र यसले यो सन्देशको URL लाई प्रतिलिपि गर्दछ।
यो तब हुन्छ जब हामी तेस्रो-पार्टी उपकरणहरूको सहारा लिन बाध्य हुन्छौं। ट्विटरले हामीलाई यो सामग्री डाउनलोड गर्न अनुमति दिदैन, हामी यसको प्रयोग गर्ने छौं एक वेबसाईट जसले हामीलाई यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्न दिन्छ। प्रश्नमा रहेको वेबसाइटलाई ट्विडाउन भनिन्छ, जुन तपाईं सक्नुहुन्छ यो लिंक पहुँच गर्नुहोस्। यस वेबसाइटमा हामीले केवल यूआरएलको प्रतिलिपि गर्नुपर्दछ जुन हामीले स्क्रिनमा देखा पर्ने बक्समा प्रतिलिपि गरेको छ।
त्यसो भए यसले हामीलाई डाउनलोड गर्ने जाँचेको सामग्री देखाउनेछ, यस अवस्थामा भिडियो। हामी ढाँचा र गुणवत्ता चयन गर्न सक्छौं जहाँ हामी भिडियो डाउनलोड गर्न चाहान्छौं। यसैले हामी एउटा छनौट गर्दछौं जुन प्रत्येक केसमा हाम्रो लागि सबैभन्दा सहज हो। यसैले हामी ट्विटरबाट कम्प्युटरमा भिडियो डाउनलोड गर्दछौं।
ब्राउजर विस्तारका साथ भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं गुगल क्रोम वा फायरफक्समा ट्विटरको डेस्कटप संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामी सामाजिक नेटवर्कबाट यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्न एक्स्टेन्सन प्रयोग गर्न सक्छौं। ब्राउजरमा विस्तार अत्यन्त उपयोगी छ, किनकि यसले हामीलाई प्रकार्यहरूमा पहुँच दिन्छ जुन अन्यथा सम्भव छैन। भिडियो को डाउनलोड संग यस मामला मा।
त्यहाँ एक विस्तार उपलब्ध छ जुन हामी दुबै गुगल क्रोम र फायरफक्समा प्रयोग गर्न सक्छौं। यस तरीकाले, यो स्थापना भएपछि, जब हामी एक भिडियो देख्छौं जुन हामीले सामाजिक नेटवर्कमा डाउनलोड गर्न चाहन्छौं, हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। विस्तारलाई ट्विटर मिडिया डाउनलोडर भनिन्छ। तिमी सक्छौ यसलाई यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् क्रोम को लागी यसको संस्करण मा। यदि तपाई चाहानुहुन्छ फायरफक्स हो, यो लिंक प्रविष्ट गर्नुहोस्.
एउटा पक्ष जुन हामीले अनुप्रयोग प्रयोग गर्दा ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि यो सम्भव छ कि हामीले ब्लकहरू द्वारा डाउनलोड गर्न विकल्पको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ, यदि यो धेरै नै भारी भयो वा हामी एकचोटि धेरै सामग्री डाउनलोड गर्न गइरहेका छौं। यस अवस्थामा, विस्तारले हामीलाई प्रश्नको ट्वीटहरूको आईडी प्रविष्ट गर्न सोध्नेछ जहाँ डाउनलोड गर्न सामग्री अवस्थित छ। यस विस्तारको साथ हामी भिडियोहरू, फोटोहरू वा GIF डाउनलोड गर्न सक्दछौं।
जब हामीले ट्वीटको यी आईडी प्रविष्ट गर्नुभयो, हामीले केवल स्टार्ट बटन क्लिक गर्नुपर्नेछ र यी सामग्रीहरूको डाउनलोड स्वचालित रूपमा सुरु हुनेछ। हामीले ब्राउजरमा यो विस्तार प्रयोग गरेर के डाउनलोड गर्छौं एक ZIP फाईलमा डाउनलोड गरिनेछ, जुनमा हामीले भनिएको सामग्री फेला पार्छौं, यदि हामी एकै समयमा धेरै भिडियोहरू डाउनलोड गर्दैछौं भने।
एन्ड्रोइडमा ट्विटर भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि हामीसँग एन्ड्रोइड फोन छ भने हामीसँग यस सम्बन्धमा केही सम्भावनाहरू छन्। ती मध्ये पहिलो उही हो जुन हामीले सुरुमा तपाईंलाई भनिसकेका छौं। हामी ट्वीटको लिंक प्रतिलिपि गर्छौं जसमा हामीले भनिएको भिडियो भेटिएछ, प्रश्नको ट्वीटमा माथिको दायाँ एरोमा क्लिक गर्दै। एकचोटि हामीले ट्विटरमा प्रतिलिपि गरे पछि हामीले एउटा वेब पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ जसले हामीलाई त्यो भिडियो डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। टाउडाउन जस्ता वेबसाइट, जुन हामीले तपाईंलाई पहिल्यै बताइसकेका छौं, र त्यो तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो लिंक पहुँच गर्नुहोस्.
यस विधिका साथै हामीसँग पनि उपलब्ध छ एन्ड्रोइड अनुप्रयोग धन्यवाद जुन हामी ट्विटरबाट भिडियो डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं। प्ले स्टोरमा, यी मध्ये धेरै अनुप्रयोगहरू देखा परेको छ जसले हामीलाई यस प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ केहि छन् जुन राम्रा प्रदर्शन बाहिर बाँकी छन् हामीलाई दिनुहोस्।
सम्भवतः सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने भनेको ट्विटर भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, जुन तपाईं गुगल प्लेबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो लिंक। यो नि: शुल्क अनुप्रयोग हो, यद्यपि भित्र विज्ञापनहरू सहित, यसले हामीलाई हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा सामाजिक नेटवर्कबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ। यस अवस्थामा, जब हामीले सामाजिक नेटवर्कमा एक भिडियो फेला पार्‍यौं, हामीले विकल्पहरू "मार्फत ट्वीट साझा गर्न ..." चयन गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि देखा पर्ने सूचीबाट अनुप्रयोग चयन गर्नुहोस्।
यस तरिकाले, भिडियोहरू यसको फोनको बाह्य भण्डारणमा, हाम्रो फोनमा सिधा डाउनलोड हुनेछ। यो अर्को विकल्प हो जुन राम्रोसँग काम गर्दछ जब यो सोशल नेटवर्कमा भिडियो डाउनलोड गर्न आउँदछ।
आईफोनमा ट्विटर भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
आईओएस उपकरणको साथ प्रयोगकर्ताहरूका लागि, यो आईफोन वा आईप्याड होस्, भिडियो डाउनलोड गर्ने तरिका केही फरक छ। जस्तो भिडियोको लिंक प्रतिलिपि गर्न, हामीले केहि फरक कदमहरू चाल्नु पर्छ। जब हामीले भिडियोको साथ ट्वीट फेला पार्दछौं, हामी यसको माथिल्लो एरोमा क्लिक गर्दछौं। त्यसो भए विकल्प option साझा ट्वीट ... »मा क्लिक गर्नुहोस्।
एक नयाँ विन्डो स्क्रिनमा खुल्नेछ, र हामीले यसको तल हेर्नुपर्दछ। त्यहाँ हामीसँग विकल्प छ ट्वीटको लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीले युआरएल पहिले नै प्रतिलिपि गरिसकेका छौं। त्यसो भए हामीले भिडियो डाउनलोड गर्न वेबमा पहुँच गर्नुपर्दछ, ट्वडाउनजस मध्ये हामी पहिले नै धेरै पटक बोलेका छौं।
यदि हामी उपकरणमा ट्वीटरबाट डाउनलोड गरेका भिडियोहरू सुरक्षित गर्न चाहान्छौं भने हामीले एउटा अनुप्रयोगको सहारा लिनुपर्दछ जुन हामीलाई यी डाउनलोडहरू अधिक सहज ढ manage्गले प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ। यस सन्दर्भमा उत्तम विकल्प भनेको MyMedia फाईल प्रबन्धक हो, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्। यसले स्थानको प्रबन्ध गर्न सजिलो बनाउँदछ जहाँ प्रश्नमा भिडियो डाउनलोड हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » aPLICACIONES » ट्विटरमा भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
विश्लेषण र पावर संगीत बक्स ++ स्पीकर पोटेनेटको रफल